Nooca Shiinaha Tire nooca wax -qabad -hayaha1 soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha | GBM
1. Teknolojiyadda patent -ka ah ee isku -darka isku -dhafka korontada, qiimaha hawlgalka ee korontada 380V waa 30% keliya isticmaalka shidaalka ee mashiinka gubidda gudaha, mana jirto qashin iyo wasakh;
2. Waxay kor u qaadi kartaa 30% shaqada qaadista iyo wadista baabuurka iyada oo aan lugaha la garaacin, shaqada kor u qaadin oo ku wadin hal cabsi;
3. Ka dib markii la beddelo qabatooyin kala duwan oo haydarooliga ah, waxay soo raran karaan, soo dejin karaan, raran karaan oo kala furfuri karaan noocyada kala duwan ee xumbo, alaab dabacsan, jilicsan oo kala firidhsan sida cawska, alfalfa, suuf, hemp, bamboo, alwaax, warqad qashin ah iyo warqad dhammeystiran. Shaqo-guri, si loo gaaro hawl ujeeddo badan leh;
“dual power” oo ah nooca taayir -ka -shaqeeyaha wax maamula
Miisaanka qaadista ugu badan 12 t
Miisaanka guud 15.1 t
Xuddunta ugu badan ee qaadista waa 41.2 t. m
Xawaaraha leexashada ugu badan 3.6r/min
Xaaladaha shaqada ee lagu dabaqi karo: samaynta waraaqaha, looxyada ku salaysan qorista, abuurista tamarta noolaha, cudbiga iyo linenka, warshadaha dharka iyo bakhaarro kala duwan oo ololi kara oo kala firdhin kara iyo kala furfurin kara iftiin kala duwan, xumbo, kala firdhay iyo qalab jilicsan.
Gacan-hayaha walxaha nooca taayirrada ee GBM wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay warqadda culus, guddiyada ku-saleysan qoryaha, koronto-dhaliyaha, cudbiga iyo dharka, warshadaha dharka iyo bakhaarro kala duwan oo guban kara oo iftiin kala duwan leh, xumbo, qalab kala firdhay iyo kuwo jilicsan. shaqada duminta. Wuxuu leeyahay sifooyinka sare ee soo socda:
4. Baabuur hawo -shidaal oo buuxa wuxuu garwaaqaa isbeddelka xawaaraha aan xadka lahayn, wuxuu ka adkaadaa saamaynta hawlgalka, wuxuu ka dhigayaa habka hawlgalka mid xasilloon, ammaan ah, ku habboon oo lagu kalsoonaan karo;
5. Qaadashada bamka laba jibbaarka ah iyo nashqad socodka qulqulka si loo xaqiijiyo shaqooyinka xawaaraha sare iyo kan hoose ee xawaaraha inta lagu jiro hawlgallada kor -u -qaadista iyo soo -dejinta, oo si weyn u hagaajinaya hufnaanta shaqada;
6. Qaabka korontadu wuxuu leeyahay aalad slide ah oo ah qalab isku -xidh oo otomaatig ah, kaas oo xalliya dhibaatada si otomaatig ah u helidda iyo ka -saaridda tuubada wax -soo -saarka korontada ee hawlgalka kor u kaca iyo soo dega ee qabashada;
7. Ilaalinta deegaanka iyo adeegsiga matoorrada korontada si loo yareeyo wasakhaynta deegaanka ee ay keento qashin -qubka inta lagu jiro hawlgalka mishiinka gubidda gudaha iyo in la yareeyo buuqa shaqada.
Isku soo wada duuboo, wiishku waa qalabka hawlgalka kor u qaadista iyo soo dejinta ugu wanaagsan meelaha go'an sida saldhigyada, dekedaha, bakhaarada iyo bakhaarada gaadiidka iyo boosteejada haamaha.
xogta ugu weyn
Shayga Cutub xog
cabbir Dhererka m 7.15
ballac m 2.6
dherer m 3.25
Raad raac track fornt m 1.81
track back m 1.8
wad xogta awoodda mootada kw 37
xog miisaanka guud kg 14800
Hore: Maareeyaha walxaha hiddo -hayaha ee go'an
Xiga: Maareeyaha walxaha Haydarooliga ee nooca taayir2
wiish kalluumeysi, wiishka sagxadda, wiishka badda, Wiishka Dheelitirka, wiishka Haydarooliga, candhuufta telescopic wiishka boom, Dhammaan Alaabta